मंगलबार राति च्याम्पियन्स लिग खेलमा बार्यन विरुद्धको खेलमा एकतर्फी रूपमा पराजित भएसँगै समर्थकहरुले बार्सिलोनालाई स्पेनको आर्सनल भन्दै मजाक उडाउन सुरु गरेका छन्।
समूह चरणको पहिलो खेलमा नै लज्जास्पद हार बेहोरेको बार्सिलोना अब युरोपको ठूलो क्लबमा नपर्ने र ठूला क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने धेरै समर्थकले स्वीकार गर्न थालेका छन्। एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखे,”बर्सिलोना यसरी पतन भएको देख्दा निकै दुख लाग्छ। उनीहरुलाई हेर्दा बार्यनसँग बच्चाको तुलना गरेको जस्तो लाग्छ।”
अर्का एकले लेखे,”बार्सिलोना यत्ति पतन भइसकेको रैछ। उनीहरुले मलाई आर्सनलको याद दिलाए।” एक तेस्रो फ्यानले ट्वीट गरे: “यो मेरो जिन्दगीमा मैले देखेको सबैभन्दा निराशाजनक बार्सिलोना हुनु पर्छ। कसरी यस्तो पतन भयो। आर्सनल भन्दा धेरै फरक लाग्दैन।”
यस्ता छन् केहि समर्थकको प्रतिक्रिया:-
Barcelona are turning into the Arsenal of La Liga
The only difference is there isn’t an overabundance of quality sides like there is in the Premier League
— Colin #ClownShowFC (@cmutch91) September 14, 2021
Barcelona has fallen. Suchagiant club with so much history. I hope they bounce back soon
— Sadam Hussein (@sadamgooner) September 14, 2021
— Il Popolo (@1SpeakingRock) September 14, 2021
Barcelona have fallen to Arsenal levels of falling off, pretty sad to see 💔
— Basil (@BasilCK_) September 14, 2021
प्रकाशित : बुधबार, भदौ ३०, २०७८१४:०४
कोम्यानले भने – ‘अहिले बायर्न बलियो देखियो, २-३ वर्ष पछि त हामी पनि बलियो हुन्छौं’